राजन राज शिवाकोटी को हुन् संगीत क्षेत्रका ?
Monday Feb 18, 2019 - 06:40 PM
राजन राज सिवाकोटी को हुन् संगीत क्षेत्रमा ?
मध्यम परिवारमा जन्मिएका सिवाकोटी संगीत क्षेत्रकॊ एक महत्वपुर्ण स्थान बनाउन सफल गायकको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । उनले पछिलो समय सुर्के थैली खै, पूर्व पश्चिम रेल , गोजीमा दाम छोइन जस्ता कीर्तिमानी गीतका गायक, संगितकार, रचनाकार राजनराज सिवाकोटी पछिल्लो समयमा मौलिक शब्दसहित नेपाली शैलीको गीतका कारण चर्चित छन् । लगभग डेढ दशकदेखि संगीत र सिर्जना गर्दै आएका सिवाकोटीलाई सुर्के थैलीले नाम दाम मात्रै दिएन राम्रो गीतकार, संगीतकार र गायकको रुपमा आम दर्शक माझ चिनाउन पनि सफल भयो ।
राजन राज सिवाकोटीलाई परिवारले के भन्ने गर्थे ?
राजनराजलाई परिवारले सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्थ्यो । उनी हुन्छ भन्थे । गीतसंगीतमा चासो त थियो तर रहरै भने थिएन बालपनमा । कक्षा तीनमा हुँदा आफ्नै दाइले लेखिदिएको गीत गाएका थिए । गीत थियो राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको ।
उनि गोपाल योञ्जन, नारायण गोपाल, भक्तराजका गीतले उनको मनलाई मोहनी लगाउन थालो । उनले बुवासँग सल्लाह मागे । “मलाई गीत मन पर्न थाल्यो । गायक बन्दा के हुन्छ ? ”बासुरीका शोखिन र शंकलक उनका बुवा बजाउन नजाने पनि एक पटक तिरिरी पार्थे र काखीमा बाँसुरी च्यापेर हिड्थे । तर, उनले छोरालाई भने, “भोलीको दिनमा जिम्मेवारी तेरै काँधमा आउँछ, परिवार पाल्नुपर्छ । गीतमा भविश्य छैन । सरकारी जागिर खानुपर्छ ।” भने । राजनराजलाई पनि हो भन्ने लाग्यो । यहि वर्ष उनले एसएलसी दिए ।
काठमाडौं किन आए सिवाकोटी ?
०५० सालमा स्नातकोत्तर पास गर्ने अभिलाषा बोकेर उनी काठमाडौं लागे । मिनभवनस्थित कमर्श क्याम्पसमा पढ्न थाले । ०५६ सालमा उनले स्नातकोत्तरको सर्टिफिकट हात पारे । विद्यार्थी युनियनले आयोजना गर्ने कार्यक्रमका लागि कलेजमा रिहर्सन हुन्थ्यो । उनी ढोकाबाट चिहाएर हेर्थे । तर, सहभागी हुँदैन थिए । सांगीतिक कार्यक्रम हेर्दाहेर्दै उनी घोरिन्थे । र पनि आफूलाई रोकेरै राखेका थिए ।
उनले जागिर सुरु गरे साम्बु कन्स्ट्रक्शनमा । उनका दुई जना मिल्ने साथी थिए, स्याङजाका चित्र गुरुङ र ओखलढुङ्गाका चेत श्रेष्ठ । ०५४ सालतिर उनीहरुले राजनराजलाई एउटा हार्मोनियम उपहार दिए । कारण गोपाल योञ्जन, नारायण गोपाल, र भक्तराजका गीत उनी गुनगुनाइरहन्थे
उनले साम्बुमा एक वर्ष पनि काम गर्न सकेनन् । छोडे जागिर । गए डोरमी स्टुडियो । सुरु गरे संगीत सिक्न । जहाँ गुरुदेव कामत, ईश्वर अमात्य र भानुभक्त ढकालले सिकाउँथे । दुई वर्ष सिके ।
एरेञ्जमा ३ हजार, स्टुडियोमा ३ हजार र बाँकी खर्च गरेर करिब १० हजारमा गीत रेकर्ड गराए । गीत थियो पप जनराको । बोल थियो, मायाँलु आउने जाने बाटो।।। । सुनिल वर्देवाले एरेञ्ज गरेका थिए । निकै मेहनत गरेको त्यो सुनिललाई पनि मन परेको थियो । राजनराजको लागि भने त्यो गीत अग्नि परिक्षा थियो । पास वा फेल त्यसले निर्धारण गर्दै थियो ।
उनले गीत त निकाले तर कसरी रेडियोमा बजाउने घनचक्करमा परे । २० दिन उनी सीडी र क्यासेट झोलामा बोकेर हिँडे । तर, मेसो पाएनन् ।
आएर नरेश भट्टराईलाई भेटे । भट्टराईले पनि उनैलाई खोजिरहेका रहेछन् । उनले गीत राम्रो रहेको भन्दै काठमाडौंमा बस्न समस्या छ भने केही सहयोग चाहिए भन्न आग्रह गरे । नरेश त सोचेको भन्दा पनि कमलो रहेछन् । नैनी जस्तै । मनमा राख्दा पनि नबिझाउने ।
उनैले दिनेश डीसीलाई भेट्न सुझाव दिए । कान्तिपुर एफएममा कार्यरत डीसीलाई भेट्न उनलाई एक महिना लाग्यो । उनले गीत सुनाए । डीसीले पनि मन पराए । सम्भावना बोेकेको प्रतिभा भन्दै सहयोग गर्ने वचन पनि दिए ।
उनले त्यहीँ तत्कालीन पप स्टार नविन के भट्टराईका लागि कम्पोज गर्न सक्छौ भने । राजनराजले सक्छु भने । एक हप्तामा कम्पोजको समयसीमा तोकेर दिइएको गीत दुई दिनमै कम्पोज सकेर फिर्ता गरे । त्यो कम्पोज पनि दुवैले मन पराए ।
यसपछि उनले ‘पञ्चामृत’ एल्बम गरे । जसमा उनको शब्द र संगीत सोलो रह्यो । यसमा नविन के भट्टराई, दिपेश किशोर भट्टराई, सुगम पोखरेल, धिरज राई र अनिल सिंहको आवाज थियो । सँगै यो लएल्बममा राजनराज र दिनेश डीसीेले पनि एक एकवटा गीत गाए ।
गायक हुने भूत चढेका उनलाई विस्तारै स्वरभन्दा पनि म संगीतका लागि पो जन्मिएको रहेछु भन्ने लाग्न थाल्यो । त्यतैतर्फ ढल्किए । राजनराजको शब्द तथा कम्पोज लोकप्रिय हुन थाले । पछिलो समयमा आफ्नु छुटै स्थान बनाउन सफल गायकको रुपमा सिवाकोटीलाई हेर्ने गरिन्छ । नेपालि सोर्ताका मन मुटुमा बस्न सफल गायकको रुपमा हेर्न थलिएको छ ।